Duufaannada Atlantic: sababaha iyo isbedelka cimilada | Shabakadda Saadaasha Hawada
Duufaanno ka dhacay badweynta Atlantiga
Jarmal Portillo | 12/01/2022 10:00 | Dhacdooyinka saadaasha hawada
Isbeddelka cimilada iyo kororka celceliska heerkulka caalamiga ah awgeed, waxaan ku yeelanaynaa isbeddello kala duwan oo ku saabsan jawiga jawiga iyo badweynta. Xaaladdan oo kale, Badweynta Atlaantigga ayaa ka digaysa isbeddelka ay ku socoto isbeddelka cimilada. The duufaanada Atlantic way sii kordhayaan oo iyaga ayaa samaynta duufaanno iyo dabaylo xoog leh.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegi doonaa kuwa sababa kororka duufaanada Atlantic iyo maxay tahay cawaaqibka ka dhalan kara isbedelka cimilada ee badweynta Atlantic ee sii kordheysa kuleylaha.
1 Duufaanno ka dhacay badweynta Atlantiga
2 Duufaannada Badweynta Atlaantigga oo kordhay
3 cilladaha xilli ciyaareedka 2020
4 Daraasadaha isbeddelka cimilada
Badweynta Atlaantigga ayaa ka digaysa. Tani waa mid kooban oo ku saabsan isbeddelada jawiga jawiga ee la arkay sanadihii ugu dambeeyay ee saameeya waqooyiga Macaronesia, aag ay ku jiraan Azores, Canary Islands, Madeira iyo jasiiradaha saxaraha ah, iyo koonfur-galbeed ee Jasiiradda Iberian. Wax kastaa waxay tilmaamayaan cimilada gobolka oo isu beddesha kulaale.
Tan iyo imaatinka taariikhiga ah ee 2005 ee duufaanta kulaalaha Delta ilaa jasiiradaha Canary, tirada duufaannada kulaala ee dhex mara gobolladan aad ayuu u kordhay 15kii sano ee la soo dhaafay. Duufaannadani waa aagagga cimilo cadaadis hoose oo daran mana soo bandhigaan hab-dhaqanka caadiga ah ee duufaannada loolka dhexe ama duufaannada ka baxsan ee aan u isticmaalnay qaybtan meeraha. Taa baddalkeeda, waxay soo bandhigaan sifooyin la mid ah duufaannada kulaylaha caadiga ah ee sida caadiga ah saameeya Kariibiyaanka dhinaca kale ee Atlantic.
Dhab ahaantii, ifafaalahan waxay si isa soo taraysa ugu shabahaan duufaannada kulaalayaasha qaab dhismeedka iyo dabeecadda. Ilaa iyo inta Xarunta Duufaanta Qaranka ee Maraykanku ay kordhisay cilmi-baarista iyo la socodka biyo-mareenkeenna sannadihii u dambeeyay, waxayna magacawday koox aan laga fiirsan oo dhacdooyinkan ah.
Duufaannada Badweynta Atlaantigga oo kordhay
Cilad-xumada aan kor ku soo sheegnay ayaa kor u kacday shantii sano ee la soo dhaafay. Waxaan haynaa tusaalooyin xusid mudan:
Duufaanta Alex (2016) Waxay ka dhacday koonfurta Azores, oo qiyaastii 1.000 km u jirta jasiiradaha Canary. Iyadoo ugu badnaan dabaylo joogto ah oo ah 140 kiiloomitir saacaddii, waxay gaartaa heerka duufaanta waxayna si aan caadi ahayn ugu gudubtaa Waqooyiga Atlantic. Waxay noqotay duufaantii ugu horreysay ee samaysa January tan iyo 1938kii.
Duufaanta Ophelia (2017), duufaantii ugu horeysay ee Saffir-Simpson Qaybta 3 ee bariga Atlantic tan iyo markii la bilaabay diiwaanada (1851). Ophelia waxay gaadhay dabaylo joogto ah oo ka badan 170 kiiloomitir saacaddii.
Hurricane Leslie (2018), duufaantii ugu horeysay ee timaada meel aad ugu dhow xeebta gacanka (100 km). Waxa ay ku dhufatay Portugal goor barqo ah dabaylo soconaysa ilaa 190 kiiloomitir saacaddii.
Duufaanta Pablo (2019), Duufaantii ugu dhawaa ee abid ka dhacda Yurub.
Si la mid ah mawjadda sare ee ugu dambeysay, Tropical Storm Theta waxay u hanjabtay jasiiradaha Canary, oo kaliya 300 kiiloomitir u jirta inay si buuxda u saamayso jasiiradaha.
Kiisaskan ka sokow, waxaa jira liis dheer oo iyaga la socda maadaama ay yihiin kuwo aad u xun oo saameeya meelaha aan soo sheegnay. Sidan oo kale, soo noqnoqoshada ayaa kor u kacday sannadkii hal mar shanti sano ee la soo dhaafay, iyo xitaa in ka badan hal mar labadii sano ee u dambeeyay. Kahor 2005, soo noqnoqoshada waxay ahayd hal mar saddexdii ama afartii sanoba mar, iyada oo aan matalin khatar weyn oo saameyn ah.
cilladaha xilli ciyaareedka 2020
Naadirkani wuxuu la socdaa waxa dhacaya xilliga duufaanta laga bilaabo Juun ilaa Noofambar ee sanadkan. Saadaasha ayaa durba tilmaamaysa xilli aad u firfircoon oo ku dhammaanaya 30 duufaan, rikoor run ah. Taas macneheedu waxa weeye in lagu magacaabo iyaga oo isticmaalaya alifbeetada Giriigga, wixii ka dambeeya xilligii taariikhiga ahaa ee 2005.
Dhanka kale, xilli sidoo kale waxaa lagu gartaa duufaano waaweyn oo firfircoon oo ka tirsan Qeybta 3 ama ka sareeya. Dhab ahaantii, waxay ku biirtaa afarta xilli ee ugu horreeya markii ugu horreysay tan iyo markii la bilaabay diiwaannada (1851) taas ugu yaraan hal duufaan oo Qaybta 5 ah ayaa samaysmay shan xilli oo isku xigta. Midda dambe aad bay ula socotaa saadaasha isbeddelka cimilada, duufaannada ugu daran ayaa saami ahaan ka xoog badan oo soo noqnoqda.
Daraasadaha isbeddelka cimilada
Waa in maskaxda lagu hayaa in kororka duufaannada ee badweynta Atlaantigga iyo kulaalayaasha qaybtan adduunku ay xidhiidh la leeyihiin saamaynta isbeddelka cimilada. Jawaabtu waa haa, laakiin cilmi baaris dheeraad ah ayaa loo baahan yahay.. Dhinaca kale, waa in aan ogaano xiriirka dhacdooyinka la arkay, iyo Spain weli ma lihin awoodda farsamada si ay u fuliyaan noocaan ah daraasadaha sifeynta hawlgalka ee lagu fuliyo wadamada kale. Waxa aan dhisi karno waa xiriir ku salaysan daraasado lagu sameeyay saadaasha xaaladaha cimilada mustaqbalka ee u malaynaya in ifafaalahan ay si joogto ah uga dhacaan barkadahayaga.
Tani waa meesha aan ka dhisi karno cilaaqaadka, inkastoo cilmi baaris dheeraad ah loo baahan yahay si loo ogaado oo loo sii hagaajiyo waxyaabaha gaarka ah ee dhacdooyinkan mustaqbalka si loo hagaajiyo qorsheynta la qabsiga isbeddelka cimilada ee la filayo. Halka ay run tahay in ay taasi suurtogal tahay waligaa ma gaadhin xoojinta sare sida qaybta 3 ama ka sareDuufaannada iyo duufaannada yar yar ee kulaylaha ayaa sidoo kale walaac gaar ah leh sababtoo ah saameyntooda weyn ee xeebaha Mareykanka waana in lagu daraa in Spain aynaan si buuxda ugu diyaargaroobin arrintan.
Sifada kale ee loo baahan yahay in la tixgeliyo ayaa ah inay soo bandhigaan hubaal la'aan weyn saadaasha. Si ka duwan kulaylaha, halkaas oo waddooyinka duufaannada ay saameeyaan arrimo badan oo la sii saadaalin karo, sida duufaannadani waxay bilaabaan inay ku soo dhawaadaan ulaha dhexe, waxay bilaabaan inay saameyn ku yeeshaan arrimo aan la saadaalin karin, kordhinta hubinta. Dhinac kale oo muhiim ah ayaa ah suurtagalnimada saameynta ugu weyn marka ay bilaabaan inay u xuubsiibtaan duufaanada loolka dhexe, kala-guurka loo yaqaan kala-guurka ka baxsan, taas oo keeni karta inay balaadhiyaan baaxaddooda.
Ugu dambeyntii, waxaa muhiim ah in sidoo kale la tixgeliyo hubaal la'aanta suurtagalka ah ee isbeddellada ku jira dhacdada aan ka hadlayno. Iyadoo dhammaan isbeddelladan mar walba la tixgeliyo iyada oo la tixraacayo diiwaannada taariikhiga ah ee laga soo bilaabo 1851, dhab ahaantii waa 1966 in diiwaannadan. waxa loo tixgalin karaa runtii mid adag oo la barbardhigi karo sidii waagii aynu joogno, sababtoo ah taasi waa bilowga waxa suurtagal ah. Ku ilaali iyaga oo isticmaalaya dayax-gacmeed. Sidaa darteed, tan waa in mar walba maskaxda lagu hayaa marka la falanqeynayo isbeddellada lagu arkay duufaannada kulaala iyo duufaannada.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan ka baran karto sababaha kororka duufaannada ee Atlantic.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Duufaanno ka dhacay badweynta Atlantiga
Daadad ka dhacay Shiinaha
Volcanoyada ugu waaweyn adduunka